एसईओ को बारे मा Ayhan Karaman संग साक्षात्कार - Ne gerekir?
सुरक्षा, गति, बहुभाषी साइटहरू, SEO अपडेटहरू
आयहान करमण, ayhankaman.com को संस्थापक र एसईओ पुस्तक को लेखक
आयहान KARAMAN टर्कीको arguably सबैभन्दा मान्यता प्राप्त SEO विशेषज्ञ। किनभने ऊ आफैंलाई बढावा दिन धेरै रचनात्मक छ र काम उसले राम्रोसँग गर्छ। के कुराले उसलाई विशेष बनाउँदछ कि त्यो हामीसँग यी सबै युक्तिहरू र जानकारीहरू खुलेर साझा गर्दछ। जब तपाईं उसलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ, उसले तपाईंको सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छ। यो उसको नम्बरमा पुग्न अत्यन्त सजिलो छ, यसले तपाईलाई सुरक्षित महसुस गर्दछ जब तपाईलाई फोन गर्दा Ayhan Karaman सँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। Ayhan Karaman एक ब्रान्ड हो कि म यसको भविष्यको बारेमा साँच्चिकै सोच्दछु।
तपाईंले संसारको पहिलो शारीरिक रूपमा अपडेट गरिएको पुस्तक तयार गर्नुभयो। SEO पुस्तक। असाधारण सफलता पछि, के यसले हामीलाई चकित तुल्यायो? स्पष्ट रूपमा हो फेरि 🙂 जसरी तपाईंले प्रतिज्ञा गर्नुभयो 🙂
हामीलाई थाहा छ तपाईं आफ्ना प्रतिज्ञाहरूका रूपमा आफ्ना प्रतिज्ञाहरूमा कत्ति संवेदनशील हुनुहुन्छ। तपाईं जहिले पनि विकास र सुधारको लागि इमान्दारीपूर्वक खुला हुनुहुन्छ, जानकारी लुकाउन र सँगै सफल हुनको लागि होइन। यसैले मैले सबै ठाउँमा पढें कि तपाईं एक धेरै राम्रो र भरपर्दो व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो स्पष्ट छ कि हामी पनि त्यस्तै सोच्दछौं।
तपाईंको ब्लग पोष्ट एक महान मार्गदर्शक हो। हामी हाम्रा पाठकहरूलाई तपाईका लेखहरू पनि पढ्न सिफारिस गर्दछौं।
कसरी तपाईंको पुस्तकमा सामग्री तपाईंको YouTube र ब्लगमा सामग्री भन्दा फरक छ?
सबैभन्दा पहिले, म मेरो पुस्तक को कथा को बारे मा कुरा गर्न आवश्यक छ। 😊 म त्यस्तो व्यक्ति हुँ जो विश्वास गर्दछन् कि यो काम केवल पुस्तकहरु संग मात्र गर्न सकिन्छ, र म किताबको पक्षमा धेरै उत्सुक थिएनु। सबैभन्दा पहिले, मैले मेरो प्रशिक्षणका सहभागीहरूका लागि विशेष पुस्तिका तयार गरें र धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरे। यी फीडब्याकहरूको आधारमा मैले पुस्तक तयारीहरू अहान किन होइन भन्ने भन्दै सुरु गरे। तर मैले केहि तल झार्नु पर्छ! तपाईं यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न, किन तपाईं यसलाई हटाइरहनु भएको छ? किनभने: यो फरक हुनुपर्‍यो।
मैले भने, तपाईं कसरी यो पुस्तक भिन्न छ, Ayhan? जीवनको लागि तपाईले यसलाई अपडेट गर्नु पर्छ। अपडेट गर्दा तपाईलाई चार्ज गरिने छैन, तपाईले शिपिंग शुल्क पनि लिनुहुन्न। एक परिवर्तनशील र विकसित उद्योगमा, त्यहाँ एक एक अफ पुस्तक छैन, हरेक पटक बाहिर आउँदा भुक्तानी गरिरहेको छैन।
मैले सडकमा हिर्काए र मैले सकिए।
मेरो पहिलो संस्करण ब्लग सामग्रीको शीर्षकहरू (जहाँ सामग्री परिमार्जन गरिएको थियो र अपडेट गरिएको थियो) पनि समावेश थियो। यो यस्तो पुस्तक थियो जहाँ मैले मेरो युट्युब सामग्रीमा क्यूआर दिशा बनाएँ, अनौंठो सामग्री समावेश गरियो, र एसईओ परिप्रेक्ष्य दिनुभयो।
दोस्रो संस्करण मैले चाहेको जस्तै थियो। मैले शब्दकोश अद्यावधिक गरे र यसलाई अधिक जानकारीपूर्ण बनायो। मैले पुनःनिर्देशहरू थपें। मैले पृष्ठहरू बीचमा पुनःनिर्देशहरू बनाएँ। मैले चेकलिस्टलाई समर्थन गर्नका लागि निर्देशनहरू प्रदान गरेको छु। मैले ई-वाणिज्य एसईओ र सामग्री उत्पादकहरूको लागि विशेष एसईओ सामग्री समावेश गरे। म प्रसिद्ध फुटबल टीम युक्ति अपडेट 😊
के तपाइँबाट केहि साइट डाटा देखाउन यो सम्भव छ जुन तपाइँबाट प्राप्त प्रशिक्षणको अनुरूप बढेको छ वा तपाइँको परामर्श संग?
म तपाईंलाई asligold.com प्रोजेक्टको बारेमा भन्न चाहन्छु।
हामीले के ग ?्यौं?
सबैभन्दा पहिले, हामीले वेबसाइट स्थापना गर्ने र उत्पादनहरू प्रविष्ट गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गरेका छौं। उसले एक व्यक्तिबाट विशेष सफ्टवेयर समर्थन प्राप्त गरिरहेको थियो। हामीले सफ्टवेयर कम्पनीसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्ने निर्णय गर्यौं र प्राविधिक विश्लेषण शुरु गर्यौं।
हाम्रो प्राविधिक विश्लेषणको परिणाम स्वरूप, हामीले साइटको स्वास्थ्य स्थिति १२-१-12 लेभलबाट 15 २ चरणमा ल्यायौं। त्यहाँ शीर्षक र मेटा वर्णन समस्याहरू, अनाथ पृष्ठहरू, टुटेका लिंकहरू, पुनःनिर्देशित समस्याहरू, ठूला छवि त्रुटिहरू, URL त्रुटिहरू, ALT ट्याग समस्याहरू थिए। हामीले ती मध्ये धेरैलाई पहिलो months महिना भित्र तय गर्यौं।
हामीले सामग्री उत्पादन गरेका छौं जसले अन्त प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको जिज्ञासु प्रश्नहरूका उत्तरहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यी सामग्रीहरू एक तरीकाले तयार गरिएको छ जुन ई-वाणिज्य प्रयोगकर्ता व्यवहारको बानी बाहिर जान्छ। (त्यसैले हामीले लामो सामग्री उत्पादन गरेनौं। कारण: आउने प्रयोगकर्ताले उत्पाद समीक्षा गर्न र खरीद गर्न चाहन्छ। हामीले त्यस्तो केही गर्नु हुँदैन जसले यस व्यवहारलाई नकरात्मक रूपमा प्रभाव पार्छ।)
केहिको लागि, तर सबै होईन, उत्पादहरू, हामीसँग खरीद गर्न प्रोत्साहनहरू तयार छन्। हामीले छोटो समयमा यसको योगदान देख्न थाल्यौं।
हामीले सोशल मिडिया र गुगल विज्ञापनहरू योजना गरेका छौं। जब हामीले राम्रो रिटर्न प्राप्त गर्न थाल्छौं, हामीले बजेट बढायौं र पुनः बजार प्रक्रियाहरू शुरू गर्‍यौं। खोज कन्सोल विश्लेषणमा, हामीले माथि १०० मा शब्दहरूको अवतरण पृष्ठहरू निर्धारित गर्‍यौं र ती पृष्ठहरूलाई आवधिक अभियानहरूसहित समर्थन गर्दछौं।
फेरि, हामीले सम्बन्धित ल्यान्डि page पृष्ठको लागि जडान योजनाहरू बनायौं। हामीले लि sources्क स्रोतहरूमा केन्द्रित गर्‍यौं जुन प्रतिस्पर्धी विश्लेषणमा देखा पर्‍यो र लि sources्क स्रोतहरू हामीले पहिचान गरे। जब हामीले लिंकहरू पायौं, हामीले फेरि क्रमवारीमा सुधार देख्यौं।
हामीले ब्लग सामग्री उत्पादन गरेका छौं। संलग्न हेडलाइन्स, अन्त प्रयोगकर्ता उपयोगी सल्लाह, र कार्य गर्न प्रत्यक्ष उत्पादन गर्न को लागी। हामीले ब्ल्ग साइडलाई केवल उत्पादनको लागि नेतृत्व गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्यौं, बरु पुनः बजारका दर्शकहरू जम्मा गर्न र त्यसपछि ब्लग पक्षमा आगन्तुकहरूलाई लक्षित गर्न।
हामीलाई थाहा थियो कि उत्पादन मोडेल र मूल्यहरूको संख्या सुधार गर्दा SEO प्रक्रियामा सकारात्मक योगदान पुर्‍यायो। हामीले यो Aslı गोल्ड ब्रान्डको लागि पनि गर्‍यौं।
Asligold.com मा Ayhan Karaman द्वारा बनाईएको सफलताको कहानी
सफलता शून्य देखि यात्रा।
प्राविधिक ज्ञान र एक्लो अनुभव मात्र पर्याप्त छैन। यदि तपाईं ई-वाणिज्य र एसईओ मा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने, परिचालन, ग्राहक सम्बन्ध, मुद्दाहरू जस्तै बिक्री र रसद यसमा एक महत्वपूर्ण योगदान छ। Aslı Hanım यो पक्ष अविश्वसनीय राम्रोसँग निर्देशन गर्नुभयो। अवश्य पनि ऊ इस्तानबुलमा छ, हामी शिमशोनमा छौ।
कुन साथीहरू तपाईका साथीहरूले पर्खिरहेका छन् जसले यस मार्गमा तपाईबाट सल्लाह वा प्रशिक्षण पाउनेछन्? कुन प्रक्रियाको साथ तपाईं ती सफलताका चरणहरू चढ्नुहुन्छ?
जब SEO वास्तवमै राम्रोसँग गरिन्छ, गुगलले यसलाई बेवास्ता गर्दैन र हाम्रो वेबसाइटलाई पुरस्कृत गर्दछ। SEO सधैं निवेश गर्न लायकको एक च्यानल भएको छ। मलाई लाग्छ कि मैले ती व्यक्तिहरूको लागि राम्रो अनलाइन SEO प्रशिक्षण तयार गरें जुन उनीहरूको सपना र लक्ष्यहरू महसुस गर्न मसँग प्रशिक्षण दिन्छन्।
तपाईं किन सोध्नुहुन्छ?
Ayhan KARAMAN SEO प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तपाइँ वास्तविक जीवन SEO परिस्थितिको लागि तयार गर्दछ। शैक्षिक यात्रा रेडियोमेड भिडियो वा सेटको साथ मात्र अगाडि बढ्नुहुन्न। विशेष गरी एसईओ पक्ष मा, यो मामला हुनु हुँदैन। हामी काँधमा काँधमा खडा हुनुपर्दछ र सँगै मिलेर काम गर्नुपर्दछ। यस बिन्दुमा, म व्यक्तिगत रूपमा मेरा विद्यार्थीहरूसँग उनीहरूको परियोजनाहरू मार्फत व्यवहार गर्दछु र उनीहरूको प्रदर्शन वृद्धि गर्नका लागि अध्ययन गर्दछु।
वास्तवमा, मैले उल्लेख गरेको एसईओ प्रशिक्षण एक गतिविधि हो जुन तपाईंलाई र्याs्कि forको लागि आवश्यक सीपहरू विकास गर्न, वेबको बारेमा विशेषज्ञ ज्ञान पहुँच गर्न, तपाईंलाई आफूले चाहे जति धेरै प्रश्नहरू सोध्ने, र निरन्तर शिक्षा र विकासको प्रक्रियामा हुने मद्दत गर्दछ।
पहिले सिक्नुहोस्, त्यसपछि कार्य लिनुहोस् र यसलाई पूरा गर्नुहोस्। एउटा प्रशिक्षणलाई विचार गर्नुहोस् जहाँ कमिहरू सँगै पहिचान गरिएका छन्, एकैसाथ समाधान गरिएको छ, वर्तमान स्थिति जाँचिएको छ, र प्रदर्शन सुधार ट्र्याक गरिएको छ। एक पाठ्यक्रमको कल्पना गर्नुहोस् जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ धेरै प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, जीवनभर परामर्श प्राप्त गर्नुहोस्, र SEO को बारेमा सिक्नुहोस्।
प्रशिक्षण र परामर्श प्राप्त गर्ने व्यक्तिले उनीहरूको अपेक्षाहरू उच्च राख्न सक्दछन्। किनकि म मेरो वचन पालन गर्दछु।
तपाईंले गुगललाई बुझ्ने कोशिश गर्नुभयो। त्यसोभए तपाईं कस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभयो? गुगलले हामीबाट के अपेक्षा गर्छ भनेर स्पष्ट छ?
गुगलले हामीबाट प्रयोगकर्ताहरू द्वारा चाहने अपेक्षा राख्छ। म उदाहरणको साथ व्याख्या गर्न चाहन्छु।
यदि प्रयोगकर्ता जाडो टायर खोज्दैछ भने, उसलाई जाडोको टायर देखाउनुहोस् र जाडो टायरको फाइदा नदिनुहोस्! जब तपाइँ जाडो टायरको लागि खोजी गर्नुहुन्छ, हामी वेब पृष्ठहरूमा आउँदछौं जुन जाडो टायर बेच्छ। यहाँ हामी हेर्दछौं कि गुगल एक खोज इन्जिन हो जसले प्रयोगकर्ताको आशय बुझ्दछ।
हामीले पृष्ठहरू, सामग्री र साइटहरूको प्रयोगकर्ताहरूको खोजी ईन्टेन्टको आधारमा कन्फिगर गर्नु पर्छ। यो एसईओ को सब भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो।
के त्यहाँ त्यस्तो चरण छ जुन गुगलले प्रकाशित गरे पछि चाँडो नै गुगलले याद गर्न सक्दछ?
स्वास्थ्यप्रद गुगल साइट कन्सोल उपकरणमा हाम्रो साइट जोड्नु र गुगल यूआरएल निरीक्षण उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्दछ। द्रुत सूचकांक प्राप्तिको लागि, हामी कृत्रिम अध्ययनबाट टाढा रहन आवश्यक छ। चाँडै नै जब हामी यो भन्छौं कि हामीले साइट खोल्‍यौं, सामग्रीहरू ठीक छन्, हामी मार्केटिंग पक्षका लागि तयार छौं, हामीले साइटमा वास्तविक प्रयोगकर्ताहरू ल्याउने तरिका खोज्नै पर्दछ।
तपाइँको "SEO टीम" सामग्री उद्योग मा वास्तव मा सराहना गरियो। तपाईको आत्माको साथ शुभकामना छ। जो जान्दैनन् तिनीहरूका निम्ति। SEO टीम। हामी प्रत्येक खेलाडीको लागि प्रश्न तयार गर्न चाहान्छौं जुन तपाईंको सामग्रीमा उल्लेख गरिएको छैन। यद्यपि तिनीहरू मध्ये केही अनौंठो भए पनि, म विश्वास गर्दछु तिनीहरू जिज्ञासु शीर्षकहरू हुन्।
१. गोलकीपर - सुरक्षा
प्रत्येक साइटको फेदमा, हामी सबै लेखहरू सुरक्षित राखीरहेको लेख देख्छौं। यो प्रश्न पेटन्ट र रेजिष्ट्रेसन प्रक्रियाहरूको बारेमा हो। डोमेन खरीद गरेपछि डोमेन हामीलाई दर्ता गरियो। एंटी चोरी र गोपनीयता प्याकेजहरू पनि उपलब्ध छन्। तर यो पर्याप्त जस्तो लाग्दैन।
साइट विचार, साइट लेख र छविहरू चोरी हुनबाट रोक्न के गर्न सकिन्छ? हामी कसरी सबै अधिकार सुरक्षित लेख लेख्न अगाडि बढ्नुपर्दछ?
यहाँ यसलाई रोक्न सजिलो छैन। जो कोही खरीद गर्न चाहन्छ उसले फेरि किन्नेछ। यो चुनौतीपूर्ण हुनेछ, तर यो कानूनी माध्यमबाट आफ्नो अधिकार खोज्न सबै भन्दा तार्किक हुनेछ। त्यसैले म छविहरू दर्ता गर्ने बारेमा कुरा गर्दैछु। म सामग्री को लागी DMCA सिफारिश गर्दछु।
२ दायाँ पछाडि - गति
तपाईको लेखमा तपाईले धेरै चरणहरू उल्लेख गर्नुभयो जस्तै कोडिod र अनुकूलन। फाईलहरू हामीसँग सबैभन्दा धेरै समस्या भएको GIFs र छविहरू हुन्। मैले कतै सुनें कि .png ढाँचा वेबसाइट लाई अधिक गाह्रो बनाउँछ। तपाईं छविहरूको बारम्बार प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ र तपाईंको केहि पोष्ट कभरहरूमा GIF पनि छ, तर तपाईंको साइटमा छविहरू र GIF हरूको लोडिंग समय गम्भीर रूपमा छिटो छ।
तपाइँको साइट गति कत्तिको छ?
मैले हालसालै .gif विस्तारको साथ छवि प्रकारहरूमा छोडिदिएँ। यो अप्टिमाइज गर्न गाह्रो छ। मेरो विषयवस्तु GIF विषयलाई अनुकूलन गर्दछ तर म अझै यसलाई प्रयोग गर्न चाहन्न। यदि यो प्रयोग गर्नु हो भने, म यसलाई सिफारिस गर्दछ यसलाई यसलाई धेरै सिक्न पछि प्रयोग गर्नुहोस्।
यो .webP छवि प्रकार को उपयोग गर्न को लागी पनि समय हो। म WordPress मा शर्टपिक्सल प्लगइन सिफारिश गर्न सक्दछु।
Le. बाँया पछाडि - सफा कोडिंग
यो प्रश्न उनीहरूको लागि हो जुन उनीहरूको ब्लग बहुभाषी साइट बनाउन चाहान्छन्।
बहु-भाषा साइटहरूले en / en वा en प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो प्रयोग गर्नु पर्छ? के यसले हाम्रो साइटम्यापमा कुनै प्रदूषण निम्त्याउँछ?
यदि तपाईं एक भन्दा बढि भाषामा सेवाहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने, तपाईं एक भन्दा बढि देशलाई लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं अर्को बजार को लागी लक्षित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, म सबडोमेन मार्ग सिफारिश गर्दछु। साइटअड्ड्रेस.एनको सट्टामा en.siteadre.com प्रयोग गर्न यो अधिक तार्किक हुनेछ। मलाई लाग्छ कि यसले दुबै प्रदर्शन च्यानलहरू र साइट प्रबन्ध गर्ने सन्दर्भमा अझ राम्रो बनाउँदछ।
यदि पृष्ठको एक संस्करण छ जुन विभिन्न भाषाहरूसँग सम्बन्धित पृष्ठहरूमा फरक भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ भने, म भाषा ट्याग प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु। (Hreflang ट्याग)
साइटम्यापमा जाऔं। तपाईंसँग URL हरू हुनुपर्दछ जुन तपाईं साईटम्यापमा वास्तवमै अनुक्रमणिका गर्न चाहानुहुन्छ। यो अन्यथा हुनु हुँदैन।
यो कसरी सम्भव छ हाम्रो पृष्ठहरू विदेशी भाषाको खोजहरूमा त्यो भाषाको अनुसार तयार गरिएको छ?
SEO को आधार प्रत्येक देशमा समान छ। के परिवर्तन भएको छ त्यो देशको गतिशीलता हो। प्रतिस्पर्धी के गर्दैछन्? यो लिंक कहाँबाट आउँदैछ? कुन च्यानलहरूमा तिनीहरू सक्रिय छन्? सामग्री कस्तो छ? खोजी आशय के हो? यो प्रतिस्पर्धी भन्दा राम्रो गर्न को लागी आवश्यक छ कि क्षेत्र मा हावी र स्टीयर।
Stop. स्टपर - वास्तु संरचना
जब हामी हाम्रो डोमेनहरू खरीद गर्दछौं, हामी इतिहास पनि खरीद गर्दछौं। मैले के पत्ता लगाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि, मैले खोजी कन्सोलबाट सयौं यूआरएलहरू हटाउने अनुरोध गरे, ती गुगलमा सूचीबद्ध नभए पनि। के हामीले पृष्ठहरू, कोटीहरू र गृहपृष्ठमा url पुनर्निर्देशित गर्नु पर्छ जुन 301०१ पुनःनिर्देशितसँग सम्बन्धित हुन सक्दछ?
हामी हाम्रो डोमेनको ईतिहाससँग कसरी व्यवहार गर्छौं?
हामीसँग त्यस्तो पृष्ठ पुन: निर्देशित गर्न उचित हुँदैन जुन हामीसँग केही गर्न सक्दैन। यदि यो अवैध चीजहरू होईन जुन डोमेन नामले विगतमा गरेको हो भने, हामीले यसलाई समस्यामा पार्नु हुँदैन। विशेष गरी हामीले गृह पृष्ठमा पुनःनिर्देशित गर्नु हुँदैन।
Stop. स्टपर - उपलब्धता
हामी हाम्रो साइटमा सुधार गर्न सक्दछौं कि केहि लिंकहरू नभए पनि, केहि तस्विर र बटनहरू तातो नक्शाले थिच्दछन्। तर कहिलेकाँही व्यक्तिहरू खाली ठाउँहरूमा क्लिक गर्छन् जुन म बुझ्दिन।
प्रयोगकर्ताहरु लाई बनाउनुहोस्amजब हाम्रो आचरण ब्यबहार हुन्छ तब हामीले के गर्नुपर्दछ?
यदि प्रयोगकर्ताका अपेक्षाहरू यस दिशामा छन् र यो वास्तवमै बारम्बार स्थिति हो, हामीले परिणामहरू लि link्क गर्न र अवलोकन गर्न पनि प्रयास गर्नुपर्दछ।
Mid. मिडफिल्डर - शब्दहरू
केहि पुच्छर खोज शब्दहरू एक अर्काको नजिक हुन सक्छन्। उदाहरण को लागी, हामी दुबै कीवर्ड "म SEO गर्न चाहान्छु" र "म SEO कसरी गर्ने" को लागी रैंक गर्न चाहन्छौं। तर जब यो प्रत्येक उप-शीर्षकमा प्रयोग हुन्छ, यसको परिणाम दोहोरिने पाठमा हुन्छ।
केहि समय पछि के गुगलले हामीलाई प्रयोग नगर्ने अर्को कुञ्जी शब्दहरूको लागि दर्जा दिन्छ?
गुगल एकदम स्मार्ट खोज ईन्जिन हो। उसलाई थाहा छ कि दुबै शब्दको नजिकको अर्थ छ र यदि तपाइँको सामग्री वास्तवमै अर्थपूर्ण छ भने तपाइँले इनाम दिनुहुनेछ। अवश्य पनि एसईओ हाउ-टु-को बारेमा विस्तृत सामग्री लेख्न अझ महत्त्वपूर्ण छ, तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका शब्दहरूमा श्रेणीकरण गर्ने साइटहरूलाई जाँच्नुहोस् र त्यसअनुरूप कार्य लिनुहोस्। सबै चीजको अन्त्य प्रतिस्पर्धी विश्लेषणमा जान्छ। यस कुञ्जी शब्दमा, त्यस्ता लिंकहरूमा, विज्ञापन in मा
Right. दायाँ खुला - स्रोत
तपाईले दुबै ब्लग र ई-कमर्स साइटहरू सिर्जना गर्नुभयो।
तपाईंको अनुभव अनुसार, यदि तपाईं ब्लग र ई-वाणिज्यको लागि छुट्टै भन्नुहुन्छ; तपाई कुन प्लेटफर्मबाट धेरै जना पाहुनाहरु पाउनुहुन्छ?
दुबै पक्षको खोज अभिप्राय फरक छ। एउटा सामान्यतया सिधा खरीद गर्न प्रयोग गरिन्छ, र एक प्रयोग गर्नका लागि जानकारी लिन वा निर्देशित गर्न सकिन्छ।
ई-वाणिज्य पक्षमा, कोटीहरूको विचारले अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। मेरो मतलब यो थिएन कि उत्पाद पृष्ठहरू र अन्य पृष्ठहरू यहाँ बेवास्ता गरिनेछ। त्यहाँ उत्पाद वर्णनको आवश्यकता छ जुन उत्पादन पृष्ठ, उच्च-गुणवत्ता फोटो, र प्रतिस्पर्धी मूल्यहरूमा बिक्री गर्दछ।
ब्लग पक्षमा, सफलता उच्च स्तरको सामग्री उत्पादन गरेर आउँछ, एसईओ फाउन्डेन्टलहरू ठूलो हदसम्म अनुसरण गरेर, र आफैलाई बढावा दिंदा।
Mid. मिडफील्ड - आन्तरिक अनुकूलन
हामी के गर्न सक्दछौं जुन हाम्रो शीर्ष ल्यान्डिंग पृष्ठहरूमा राम्रोसँग काम गर्दछ?
म राम्रो पृष्ठ स्थिति र राम्रो जैविक ट्राफिकको साथ मेरो पृष्ठहरूको लागि आन्तरिक अनुकूलनको नाममा केहि गर्नका लागि सँधै चिन्तित छु। हो, केहि गलत छ, तर जब यो सम्पादन हुन्छ, तपाईं एकदम खराब स्थानहरूमा जान सक्नुहुनेछ जुन १ स्थानमा छ।
म यो जोखिम लिन्छु, मेरो शीर्षक, मेटा विवरण र समान मापदण्डहरू गलत छन्, १ मिनेट प्रतिक्षा नगर्नुहोस् यदि तपाईं भन्नुहोस् कि तपाईंले तिनीहरूलाई ठीक गर्नुहुनेछ।
हामीले मोबाईल र डेस्कटपको गति सुधार गर्नुपर्दछ, र प्रयोगकर्ता अनुभवको सर्तमा अझ राम्रो गर्ने तरिकाहरू अन्वेषण गर्नुपर्छ।
होमपेजको H1 शीर्षक के हुनुपर्दछ? साइटको नारा? के यो आफ्नो सबैभन्दा चासोको विषय भएको हो? यो ब्राण्ड हो?
म स्पष्ट उत्तर दिन चाहन्छु: ब्रान्ड
St। स्ट्राइकर - लिंकहरू
तपाईं Screaming Frog इजाजतपत्र को साथ उपहार को रणनीति साँच्चै विस्मयजनक छ। म प्रश्नको अन्तमा तपाईंको भिडियो छोड्छु।
मसँग एक ब्लग पोष्ट छ जसले पर्याप्त जानकारी दिन्छ, तर त्यहाँ अर्को स्रोत छ जुन मलाई वास्तवमै मनपर्दछ यो प्रस्ताव गर्दछ। म मेरो आगन्तुकलाई त्यो जानकारी पढ्न पनि चाहन्छु, र म पुनःनिर्देशित गर्दै छु। यस्तो लाग्छ कि म तपाईंको लेख र भिडियोहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु र यो अन्तर्वार्तामा दिशा दिइरहेको छु।
के अन्य साइटहरूमा लिंक गर्दा मेरो साइटको मूल्य कम हुन्छ?
यदि तपाइँले सन्दर्भित गर्नु भएको साइट अवैध र गैर लाभकारी साइट होईन भने यसले कहिले पनि हानी गर्दैन। अर्को शब्दहरु मा, ayhankaraman.com संग लिंक गर्नाले तपाईलाई कहिले पनि हानी हुने छैन। यदि प्रयोगकर्ता खुसी छ भने, तिनीहरू गुगलमा खुशी छन्।
१०. आपत्तिजनक मिडफिल्डर - सामग्री र SEO
हामी कहाँ स्वास्थ्यकर्मी हिसाबले एसईओमा गुगलका नयाँ निर्णयहरू र अपडेटहरू पछ्याउन सक्छौं?
११. बायाँ खुला - मोबाइल
हामी मोबाइल र कम्प्युटर दुबैको सवालमा यो प्रश्न सोध्न चाहन्छौं। हामीलाई लाग्छ कि यो वास्तवमै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो, तर हामीले हाम्रो साइट तयार गर्दा यस्तो खोजी गरेका थियौं, तर हामीले इन्टरनेटमा यसको जवाफ फेला पार्न सकेनौं।
कम्प्युटर र मोबाइल दृश्यमा हेडिंग र अनुच्छेद कति अंक हुनुपर्दछ?
म H1 26px अन्य हेडर ट्याग क्रमशः ड्रप गर्दैछु। म 13px को रूप मा सामग्री पाठहरु को उपयोग गर्दैछु। मोबाइल र डेस्कटप उस्तै छन्।
तपाईं विज्ञापन रणनीति को मामला मा उदाहरणका रूपमा लिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। परम्परागत भन्दा विपरित, तपाइँको विज्ञापन मा हेराई संख्या को महत्त्व दिन तपाइँको सबै कामहरु पछ्याउन को लागी एक तर्क हो।
आयहान करमणको कथा
हामीले तपाईंको लागि एसईओको बारेमा Koray Tuğberk Gbur साक्षात्कार गरेका छौं। मुख्य;
कुशल | ।।
07/08/2021 at 06:10 - जवाफ दिनुहोस्
मँ माया गर्छु कि तपाइँ केहि कथाहरु, साक्षात्कार र दुर्लभ जानकारी साझा गर्नुहोस्।
के तपाइँ कहिल्यै अन्य ब्लगहरुमा एक अतिथि लेखक बन्ने सोच्नुभएको छ? मसँग एक ब्लग छ जुन तपाइँले छलफल गर्नुभएको विषयहरुमा केन्द्रित छ। मलाई थाहा छ तपाइँ मेरो विचारहरुको आनन्द लिनुहुनेछ।
यदि तपाइँ टाढाबाट पनि रुचि राख्नुहुन्छ, मलाई एक ईमेल पठाउन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
09/08/2021 at 13:37 - जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, सर्वप्रथम तपाइँको बहुमूल्य टिप्पणी को लागी धन्यवाद। ।।
हामीले टिप्पणी फारम भर्ने क्रममा तपाइँले पेश गर्नुभएको लेख लि reviewed्क समीक्षा गर्नुभयो। हामीले देख्यौं कि तपाइँ छिटो र अविश्वसनीय ब्याकलिंक प्याकेजहरु प्रस्ताव र यसको बारे मा जानकारी दिनुहोस्।
दुर्भाग्यवश, हामी एसईओ अध्ययन मा रुचि छैन कि यस्तो तरीकाहरु को लागी नेतृत्व गर्दछ। जब तपाइँ स्वस्थ र अधिक कुशल तरीका मा काम गर्नुहुन्छ, हामी एउटै आवृत्ति मा भेट्न सक्छौं। तब हामी तपाइँलाई थाहा छ गर्व हुनेछ, सिक्न र सहयोग गरेर सिकाउन!